भुइँ मान्छेको कथा: आधा गाँस, असुरक्षित बास | Nagarik News - Nepal Republic Media
भुइँ मान्छेको कथा: आधा गाँस, असुरक्षित बास
सडक छेउ कटकुवा स्वास्थ्यचौकीको पर्खालसँग जोडेर बनाएको अञ्जुको घर। तस्बिरः गणेश विशु/नागरिक
वीरेन्द्रनगर - दैलेख घर भइ वीरेन्द्रनगरस्थित कटकुवा बस्दै आएकी अञ्जु सार्की दिनभरि ढुंटा गिट्टीको काम गरेर सुतिरहेकी थिइन्। जस्तापाताले बारेर बनाएको उनको घरमा बिहीबार राति १ बजेतिर कसैले ढाेका ढक्ढक्यायाे। दुई छोरी र एक छोरालाई सुम्सुमाउँदै अञ्जुले थाहा नपाए झै गरिन्। अपरिचित व्यक्ति ढोका खोलेर भित्र पस्न खोज्दा अञ्जुले हिम्मत बटुलिन्,र भनिन् ‘को होस् रातिमा ढोका हान्ने ? लाज छैन यस्तो विपन्नको घरमा आएर रातिमा ढोका हान्ने ?’
विद्यालय जाने हो ? नागरिकको प्रश्नमा ललितले खुसी मुद्रामा भने, ‘आजबाट की भोलिबाट जाने हो।’ अञ्जुको जस्तै यी बालबालिकाको पनि ठूलो लक्ष्य छैन। सुरक्षित बास र सुखसँग साँझ बिहानको छाक नै यो परिवारको प्रमुख लक्ष्य छ। हालसम्म कही कतैबाट सहयोग नपाएकी उनले भनिन्, ‘हामी भुइँ मान्छेलाई कसले हेर्ला।’ दैनिक काम नपाउँदा उनलाई जीविकोपार्जन गर्न कठिन भएको छ। छोराछोरीको भेट भर्न कयौं दिन आफ्नो पेट भोकै राखेको उनलाई सम्झना छ। बाटोको सार्वजनिक जग्गामा सानो टहरा बनाएकी उनलाई कसैले उठाउँछ की भन्ने चिन्ता पनि उस्तै छ। केही दिन त नखाएरै बिताएकी उनले भनिन्, ‘भोक र प्यास मेरा साथी भई सके।’
प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७६ १७:०१ बिहीबार
भुइँ_मान्छे श्रमजीवी महिला